Fedhii wal qunnamtii saalaa dubartii. Macaafni Qulqulluun waa’ee wal-qunnamtii saala gosa tokkicha gidduutti taasifamuu maal jedhaa?
Chaayinaa keessatti tilmaamaan namoonni miiliyoona Chaayinaa keessatti namoonni miira saalquunnamtii hin qabnu yeroo baay'ee interneetii fayyadamuudhaan beekamu, mariiwwan ineterneetiidhaan geggeeffaman 'online forum' irratti adda durummaan hiirmaatu.
Magaalaa Shanghai kan jiraattu Diane fi dubartoota Chaayinaa biroo kanneen fedhii saalquunnamtii malee jiraataniif kun filannoo miira saalquunnamtiiti. Yuuniversitii yeroo turtetti lammii Dutch tokko waliin hariiroo jaalalaa eegalanii turan, isheen garuu fedhii saalquunnamtii gonkumaa akka hin qabne yerosuma adda baaste.
Battala sanarraa eegaltee fedhii saalquunnamtii dhabuusheetti baay'ee dhiphatti, jaalala mi'eeffattee utuu jirtuu saalquunnamtii raawwachuuf waanti ishee daangesse maal akka ta'e interneetii ykn online irra barbaaduu eegalte.
Wayita kana garee namoota fedhii saalquunnamtii hin qabnee kan intarneetiidhaan waliin mari'atan, garee AVEN, jedhamutti baate.
Erga hiikaa jecha 'namoota fedhii saalquunnamtii hin qabnee' ykn 'asexual' dubbistee booda, akkas ta'uushee barte. Akka aadaa Chaayinaatti maatiin ulfina guddaadha. Maatiin ishee intallisaanii dhala malee hafti jechuun akka yaadda'an dubbatteetti.
Imaammata walhormaataa 'maatiin tokko daa'ima tokko ' jedhuun kan beekamtu Chaayinaan erga hanqinni baay'ina uummataa ishee quunnamee as namni hunduu yeroodhaan gaa'ila godhatee akka ijoollee horu ajajjeettii. Bara oota keessa Chaayinaa keessatti daa'imni yoo dubara taate ulfa baasaa turan, wayita sanarraa ka'ee baay'inni dhiirotaa dbaaleera. Dhumarratti harmeen koo na hubatteetti. Gaa'ila na hin gammachiisnetti na oofuu hin barbaaddu. Abbaan kiyya garuu rincicaadha. Ejjennoosaa jijjiiruu hin barbaadu.
Yoo dargaggeessatti siqxee hariiroo uummatte fedhii saalquunnamtii ni godhatta naan jedha'' jetti Dianen. Oduu Itoophiyaa Viidiyoo Jajjaboo.
Mudoo fedhii saalquunnamtii : 'Fedhiin saalquunnamtii maal akka ta'e hin beeku' 5 Fuulbana Hedduun isaanii muuxannoo waliif qoodu, inumaa jechoota mataasaanii uummatanii ittiin fayyadamu. Namoonni miira saalquunnamtii hin qabne namoota akkamiiti? Kun kan amantiidhaan abboomamuudhaan fuudha ykn heeruma dhiisaniin tokko miti.
Umurii kamitti wal qunnamtii saalaa jalqabuutu gaariidha? Mata dureewwan walitti dhiyaatan Saala Fayyaa. Jalqabatti deebi'i.Dargaggoonni hedduun dafanii wal qunnamtiii saalaa jalqabuun, dubartoonni ammoo durbummaa isaanii dhabuun akka isaan gaabbisiisu qorannoon tokko ifoomse.
Dubartoonni Biriiten qorannicha keessatti hirmaatan harki sadii yeroon isaan itti wal qunnamtii saalaa jalqaban umurii sirrii akka hin taane himan. Dhiironnis akkasuma harka afur keessaa harka tokko tahan yeroon wal qunnamtii saalaa itti jalqaban waan ariifateef akka isaan gaabbisiiu himaniiru. Dargaggoonni qorannicha irratti hirmaatan umurii isaanii kan waggaa 20 hin guunneefi kaan ammoo jalqaba waggaa 20 ffaa keessa kan jiranidha.
Akka UKtti namni kamiyyuu wal qunnamtii saalaa gaggeessuuf umuriidhaan waggaa 16 ol tahuun dirqmadha. Qorannoo akka biyyaalessaatti sadarkaa jireenyaafi ilaalcha saalqunnamtii irratti gaggeefame irratti umuriin seeraan wal qunnamtii jalqabuuf taa'e qophii qaamaa gahaa gochuuf gahaa miti jedhame. Qorannoon akkasii kun waggota kudhan keessatti al takkaa kan gaggefamu yoo tahu ilaalchaafi amala wal qunnamtii saala ilaachisee mul'atu irratti odeeffannoo guutuu qindeessa.
Qorattoonni London School of Hygiene and Tropical Medicine bara hanga gidduutti deebii dargaggoota 3, argataniiru. Yeroo bal'inaan deebii kennanis hedduun isaanii durbummaa isaanii osoo hin balleessiin osoo turaniiru tahe akka itti tolu amanu. Dubartoonni hedduun yeroo umuriin isaanii waggaa 18 tahu wal qunnamtii saalaa akka jalqaban himan, walakkaatii ol kan tahan ammoo xumura umurii isaanii waggaa 16ffaa irratti yoo tahu harka sadii keessaa tokko ammoo osoo umuriin isaanii wagga 16 hin guutiin wal qunnamtii saalaa raawwatan.
Dargaggoonni kunneen amma yeroon itti wal qunnamtii saalaa gaggeesudha jedhanii amananiimoo dhiibbaa hiriyyaan gara murtoo kanaatti galu kan jedhus qorateera. Dubartoonni walakkaa ol tahan gaafficha kufaniiru dhiirota kudhan keessaa amoo namni afur akkasuma yaada kana irratti kufaniiru.
Kana jechuun murtoo mataa isaaniin osoo hin taane tasa ykn dhiibbaa hiriyaan gara murtichaatti akka galan himan. Miiltoon qorattoota qorannicha irratti hirmaatanii Dr Melisa Palmer dubartoonni warra dhiirotaa caalaa wal qunnamtii akka gaggeessaniif hiriyyaa isaanii irraa dhiibbaaf saaxilamu jette. Shamarran shan keessaa tokkoofi dhiirota kudhan keessaa tokko yeroo wal fakkataatti wal qunnamtii saalaa raawwachuuf qophii akka hin taane himan.
Namoota kudhan keessaa sagala kan tahan guyyaa jalqaba wal qunnamtii saalaa gaggeessan malawwan ittisa ulfaafi dhukkubaalee ni fayadamu. Mobaayiloonni ammayyaa yaada qunnamtii saalaa dargaggoota Indiyaa faalaa jiru.
Yoo gaaffiiwwan kannen olii hunda eeyye'' jettee deebiste yerichi wal qunnamtii saalaa gaggeessuuf qophii tahuu kee agarsiisa taha. Wal qunnamtii saalaa jalqabuun dura namni kamiyyuu gaaffiiwwan kanneenin of ilaaluun gaarii akka tahu qorannichi ibseera.
Oduu Itoophiyaa Viidiyoo Jajjaboo. Umurii wal qunnamtii saalaa jalqabuun gaariidha jedhame qorannon ifoome 15 Amajjii Kiniinii bicuu, warraaqsa diinagdeef ka'uumsa taate Lixa Oromiyaatti saamicha kan gaggeesse eenyu? Jalqabatti deebi'i. Odeessa kana irratti dabalata.
Qaama saalaa furdifachuuf, BirriiKiniinii bicuu, warraaqsa diinagdeef ka'uumsa taate. Miidhama qaama: Osoo isheetti hafeera tahe jechaa deessisan.
Isin hin darbiin.Yaalii Ajjeechaa Dr. Abiy Ahmad irratti yaalame. Obboleettii haadha mana kootii ulfeesse.
Alamuddiin malamaltummaan mootummaa Saudi Arabiyaatin hidhame. Baqqalaa Garbaa Wabiidhan Gadii Lakkifamuufi!
Wantoota dafanii xumuruu hin barbaadamne keessa inni tokko walqunnamtii saalaa dha. Haadha manasaani yookan jaalalleesaani gammachiisuf turtii yeroo dheera kannen hawwan danuu dha. Rakkoo kana furuuf yookan immo akkaata turtii gammachiisa kana dheerifachuuf isiin gargaaru keessa isa asii gadiitti tarreefamee dha.
Namoota rakkoo walqunnaamtii saalaa dafanii xumuruu qabaniif: 1. Afuura dheeraa deap breath fudhachuu. Yoo xixiqqeessanii afuura baafatan gara dafanii sanyii kormaa dhangalaasuutti geessa. Qofaatti shaakaluu. Kanas qofaa ofii shaakaluun gaariidha.
Jarjaruu fi ariifannaa, sodaa fi miirota kana fakkaatan haga dandeenye ofirraa fageessuu qabna. Namootni walqunnaamtii saalaa yeroo dheeraaf hin godhiin yoo turan waan kun akka mudatu ni taasisa.
Fayyaan faaya Dr. Gurmeessaa seenuu dhan gaaffilee keessan gaafachuu dandeessan. Hanga barruu biraan walitti deebinuttii turtii gaari! Dr yaada gaariidha baayyee galtoomaa umrii nuu dheeradhaa Rabbiin oromummaa siif kennee Umrii si haadheeressu jabaadhaa Nu barsiifadhaa Galtoomaa.
Gaafiin qaba. Rakkoon gahu jiraa? Yoo jiraate nuuf barreeysaa. Thank you very much! Keep it up. Odeeffannoo sirraa argannu baayyee natti toleera bayyee galatoomi,ulfaadhu ,nagaa fi fayyaa him dhabin. Beekumsoota gaarii hedduu qabdu. Galatoomaa isaan sanaaf.Masiriin biyya Arabaa keessaa qoricha dubartoota saalqunnamtii iratti fedhii isaanii cimsu akka omishamuufi gabaaf dhiyaatu hayyamte ishee jalqabaadha. Qorichi kun akkuma qoricha dhiiraaf saalqunnamtii irratti cimsuuf gargaaru 'Viagra' jedhamu kan dubartootaaf saalqunnamtii irratti fedhii akka qabaatan cimsuuf gargaarudha.
Faayidaa Wal qunnamtii Saalaa qabu
Ofii gabaan qoricha kanaa biyya akka Masirii hedduu hawwaasa safuufi of-qabuun beekamaa ta'etti gabaa qabaataa laata? Kan akkas jettu Leeyilaa kan yeroo jalqabaatiif kiniinii qoricha fedhii saaqunnamtii dabalu "female Viagra" - yookaan ammoo jecha keemikaalaa ittiin waamamu flibanserin jedhamuun waamamu fudhattedha. Qorichi kun yeroo jalqabaatiif akka hojiirra ooluuf kan hayyamame US keessatti waggaa sadiin dura ture.
Yeroo ammaa kana ammoo kampaanonni Masirii biyya isaanii keessatti omishuu jalqabaniiru. Leeylaan maqaa ishee isa dhugaa miti - haadha warraa safuu beektuufi of-qabduu taateefii umuriin ishee walakkeessa 30 keessa kan jirudha. Akkuma dubartoota Masirii hedduu waa'ee rakkoowwan qunnamtii saalaafi fedhiiwwan saalqunnamtii dubbachuun laguu itti ta'ee waan sodaattuuf of dhoksuu filatteetti.
Erga gaa'ela keessa waggoota 10 turtee booda, qoricha kana fayyadamuu murteessiteetti. Kanas kan gochuu barbaadde, "calliseedhuma waanan baruuf fedhuu horadheef" jetti. Leeylaan rakkaa fayyaa hin qabdu. Kanaaf qoricha kana ibsaafi ajaja ogeessa fayyaa malee bitatti. Shaakalli akkas qoricha ibsaafi ajaja ogeessa fayyaa malee bitachuun kun Masirii keessatti baratamaadha. Takkaa yaaleen, isa booda garuu itti hin deebiyu. Biyya Masiriitti gaa'ela hiikuun dabalaaa dhufeera. Miidiyaaleen biyya keessaa tokko tokko kanaaf sababa yeroo dhiyeessanis rakkoowwan qunnamtii saalaa waliin walqabatanii dhirsaafi niitii gidduutti uumaman ta'a jedhu.
Akka Maraghy jedhutti qorichichi kan rakkoo hin uumneefi bu'a qabeessadha. Ogeessonni faarmaasiifi doktoraanni hedduun garuu kana irratti walii hin galan. Ogeessi faarmaasii ani itti dubbadhe tokko qorichichi dhiibbaa diiga "sadarkaa baayyee yaachisaa ta'etti" gadi buusuu danda'a jedha.
Murad Sadiq ammoo Kaayiroo Kaabaatti faarmaasii isaa keessatti qoricha kana gurgurata. Yeroo namoonni kana bitachuuf dhufan miidhaa inni qaqqabsiisuu danda'u sirriitti ittin hima garuu "isaan didaniidhuma bitatu. Dubartoonni yeroo hedduu gaafachuudhaaf ni qaaneffatu. Jechi miidiyaa biyyattiidhaan 'viyaagaaraa dubartootaa "female Viagra" njedhu sirrii miti jedha. Kiniiniin viyaagaaraa Viagra pill dhiigni gara qaama saalaa dhiiraatti daddarbu foyyaa'ee akka qaamni saalaa isaanii dhaabbachuu dadhabu akka jabaatu taasisuun gar gaara.
Kan jalqabu sammuu keessatti. Dubartiin abbaan manaa ishee ishee hacuucu ykn akka hin taanetti qabatu walitti dhufeenya sirrii qabaachuu hin dandeessu. Wallaansi fayyaa kamiyyu kana hin fayyisu. Akka Aadde Qotb jettutti qorichi flibanserin jedhamu kun bu'aan isaa hanga miidhaa isaa hin ga'u. Dubartoonni masirii waa'ee fedha saalqunnamtii isaanii waliin walqabsiisee hanga sadarkaa isaanitti tolutti dubbachuu irra ga'uudhaaf karaa fagootu isaan eeggata.
Leeylaan "rakkoo dhimma saalqunnamtii waliin walqabate gaa'ela isaanii keessatti mul'atu irraan kan ka'een kan wal hiikan" dubartoota hedduun beeka jetti. Kun yoo abbaa manaa jaalala namaaf qabu yoo ta'edha.Ilmii namaa wantoota isaaf barbaachisu keessa inni tokko walqunnamtii saalaa dha.
Qunnamtiin Saalaa sammuu keenyaf aara galfii dha. Fedhii Saalaa Dabala Increased Libido Dhiirotni rakkoo fedhii saalaa qabaniif furmaatnisaa, yeroo yeroo dhan qunnamtii saalaa raawwachu yaalu dha. Kuniis maashaalee afuffaa fincaani jalatti argamu humna ykn irree itti horata. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
Please select a letter from the index above to see entries. Design by: Qubee Technologies oroict. Tuesday, April 14, Maxxansa Haaraa. Irreecha: Sirna Irreechaa namoota jaha irraa hanga miiliyoonota hedduutti. Oromoo Gorsa. Hamma Dubbifame: 7, Faaruu Loonii — afaan-oromoo. YAADA 1. Maaloo yaada kee barreessi. Maqaa keessan galchaa. Ergaa dogoggoraa galchite. Leave this field empty. Nu Hordofaa. Maxxansaalee haaraa. Afaan Oromo - December 6, 0.
Kuusaa Jechootaa Afaan Oromoo. Afaan Oromo Online March 6, December 13, December 6, Seenaa Gabaabaafi Kitaabota Gaaz.Siinqee dheerina dubartii qabattu akka gitutti muru. Siinqeen akka diimatee bareedu baaxii manaa jala bakka aara argatutti suuqu. Siinqee akka uleetti hin fayyadaman, horii ittiin hin haleelan. Yeroo qabatan illee akka dhadhaabbataatti hin fayyadaman. Dubartoonni siinqee qabatanii gurumuudhaan sirna hawaasummaa fi amantaa heddu wanta raawwataniif siinqeen waraana dubartii ti jedhu.
Haati intala heerumsiistu, siinqee, boraatii fi baarree qopheessiti. Boraatiin muka irraa soqamee tolfamee, calleedhaan faayame immoo mallattoo haadha-warrummaa ti. Idaayyittiin seera hirma furaa booda, siinqee boraatii fi baarree qabattee ol seentee gola ishii keessi.
Kanumaan haadha siinqee taati. Siinqee seeraan kenname kanaan mirga haadha-warrummaa ishiin qabdu ittiin tikfatti. Hawaasa keessattis dubartoota siinqee qaban waliin gurmuu uummatanii seera adda addaa ittiin raawwachiisu. Dubartiin siinqee qabatte, hawaasa keessatti ulfina guddaa qabdi. Dubartii siinqee qabattee karaa deemtutti yoo dhufan hin qaxxaamuran. Dhaabbatee ishii dabarsuuf dirqama qaba. Dubartoonni seera siinqee raawwachiisuuf gurmuun deeman, weedduu siinqee weeddifachaa mana dubartii abbaan warraa dhaane sana qaqqabu.
Dubartoonni dura qaqqaban, dubartii sana siinqee qabachiisanii manaa baasu. Bultiin abbaa hin qabu. Kanaafiyyuu dhiirti marti namicha balleessaa hojjate sana murtiitti dhiyeessuuf carraaqa. Yeroo seera kana raawwatan, weeddudhaan siinqee faarsuu hin dagatan. Qaamni seera raawwachiisu, nama miidhaa kana raawwate, waamanii dhiyeessanii, dubbii qoratu.
Hanga murteen kennamutti, dubartoonni, roorroon akka irraa dhaabbatu weedduudhaan gaafatu. Xumura irratti caffeen, miidhaa qaqqabe madaalee, murtee dabarsa.
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Please select a letter from the index above to see entries. Design by: Qubee Technologies oroict. Tuesday, April 14, Maxxansa Haaraa. Irreecha: Sirna Irreechaa namoota jaha irraa hanga miiliyoonota hedduutti. Oromoo Aadaa - Duudhaa Seenaa.
Hamma Dubbifame: 1, Abduselam Hiikkame. Maaloo yaada kee barreessi. Maqaa keessan galchaa. Ergaa dogoggoraa galchite. Leave this field empty. Nu Hordofaa. Maxxansaalee haaraa. Afaan Oromo - December 6, 0.Sammuu namoota gariitti jaalala jechuun wanta jibbamaa fi fokkuu waliin wal qabateedha.
Sammuu namoota birootti immoo jaalala jechuun walqunnamtii saala qofaan kan wal qabateedha. Jaalalli wanta fokkus miti wal qunnamtii saalaa qofaan kan wal qabates miti. Hiikni isaa garuu nama namaatti ni jijjirama. Akkuma wantoonni hunduu daangaa qaban jaallallis daangaa qaba. Yoo garmalee xiqqaate jibbaa fi baditti jijjirama. Yoo garmalee guddattes wanta fokkutti nama harkisa.
Jalqabni jaalala ija. Ijji ni ilaalti, ergasii yaanni sammuu keessatti ni bilchaata. Bilchinna yaada kanatu ibidda jaalala uuma. Onneen ibidda jaalalatin gubamuu jalqabdi yoo daangaa hin qabaatin.
Ergasii gubaa fi laalaa isaa dhandhamu. Wanta maraatan yookiin ijjoollen hojjattu hojjata. Suuta suuta jaalallis ibiddatti jijjirama. Ni ilaalta, yaada bilcheessita, walin haasawu barbaadda, ergasii sadarkaa itti aanutti darbita. Sababoonni gurguddoon ibidda jaalala namatti qabsiisan kanniini:. Nan balleessa jedhanii yaadunis gara hin taanetti nama oofa. Daangaa kana darbuun gara ibiddaatti kan olguddisan keessaa sababni tokko hiriyyaadha.
Ati yoo ofirraa hin dhoowwin balaaf saaxilamuu dandeessa. Sheyxaanni sitti dhufuun si wasawasaa. Ati maaliif dhabdaa? Waliin taphatu, waliin kokolfuu. Kana wanti namni hunduu hojjatu ati nama addaati? Jaalalle dubartii tee eegdaa? Ani jaalalle dubartii hin qabu. Kunoo namni hunduu harka wal qabatee adeema. Hin agartu akkamitti akka waliin kolfan, taphatan, jireenya gammachuu jiraatu. Nageenya fi tasgabbii dhaban. Ani Alhamdulillah tan walitti nyakkisu hin qabu.
Jireenya tasgabbii fi nageenya jiraadha. Sheyxaanni namaati fi jinni haaluma kanaan wanta fokkutti nama kakaasu. Ati tole jette yoo hordofte dukkana keessaa hin baanetti seenta.
Yoo tanaan dura wanta kanatti seente keessaa bahuuf ammarraa taatafadhu. Jireenya yuniversiti — Ijjolleen yommuu warra irraa fagaatan akka waan bilisoomanitti itti dhagahama. Shamarrittin osoo hin beekin tasa harka isaatti kufti. Ergasii jireenyi dukkanooftu fi wal xaaxa itti taati.
Send chat message wow api
Circuit board serial number lookup
African journals indexed in scopus
Kigakora on Fedhii wal qunnamtii saalaa dubartii